Goota baruu: Seenaa Jaal Goollicha Dheengee Bonayyaa (Ajajaa WBO Zoonii Kibbaa) – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooGoota baruu: Seenaa Jaal Goollicha Dheengee Bonayyaa (Ajajaa WBO Zoonii Kibbaa)
Goota baruu: Seenaa Jaal Goollicha Dheengee Bonayyaa (Ajajaa WBO Zoonii Kibbaa)
Jaal Goollichi Dheengee Oromiyaa gama kibbaa, Godina Booranaa, Ona Mooyyalee ganda baaddiyaa Tuqaatti bara 1973’tti abbaa isaa aabbaa Dheengee Bonayyaa fi haadha isaa aatoo Boora Jiloo Ketee irraa dhalatan. Dhiira tokkoo fi dubartoota 5’n waliin dhalatan.
Umuriin isaa barumsaaf yeroo gahutti biyyaa keeniyaa dheeda Obbuutti kan argamu mana barumsaa sadarkaa 1ffaa #Soloolootti barumsaa qaraa eegalan. Soloolon dirree goototati. Utubduu qabsoo sabaati. Teessoo leenca kumataamaati. Sololoo yoo maqaa dhahan hardhallee gantuu fi maltuun hin rifanne hin jirtu yoo jedhuu dhugaa namuu haaluu hin dandeenyeedha. Jaal Goollichii ardaa hardhura qabsoo ta’ee kan keessatti dhalatee barachaa guddate. Barumsaa isaa kutaa olaana fi Qophaa’inna ardaa Saakuutti baratan.
Jaal Goollichii obboleessa hangafaa kan waliin dhalatan tokkochallee qabsoo saba Oromoo kan ABO’n durfamuu irratti dhabe ofiifis xiiqiidhaan manaa bahee qabsoo hidhannootti seenuun mootummaa gabroomsa Itoophiyaa dura dhaabbachuu jalqabe. Umrii isaa kan yeroo ammaa waggaa 47 keessaa waggaa 27 qabsoo hidhannoo irratti dabarse.
Nama yeroo Itoophiyaa fi Shaabiyaan waraana bilisummaa Oromoo dhabsiisuun moonaan kibbaa qofti hafte adda durummaan lolee diinoota salphisuun qabsoo saba dhabama irraa oolcheedha. Nama osoo ani jiru sabni koo moo’amee hin salphatu jedhee adda durummaan lolee madaa’ee qabamee mana hidhaa Keeniyaatti hidhaa waggaa 7’f hidhameedha. Goota bara 2001 gaafa shiraan moonaa qabsoo kibbaa cabuuf waraanii ibsoo adda bahe akeekaa ganamaa irratti cichuun qabsoo Oromoo dhabamuu irraa oolcheedha.
Goota bara 2008 gaafa waraanni QC adda bahuun moonan qabsoo kibbaa cabe akeekaa ganama irratti cichuun qabsoo saba kan dhabama irraa geette deebisee ijaaruun dhabama irraa oolcheedha. Sabaaf jedhee hidhame, sabaaf jedhee waraaname, sabaaf jedhee summii nyaachifame. Eegaa seenaa jaal Goollicha Dheengee himuuf yeroonu nama hin gahu.
dhiira kaayyoof jecha
Dhiira sabaaf jecha
Dhiiga ofii cobse.
Dhiira dhugaa haaluun
Arraba hin dabsine.
Dhiira akeekaa qabsoo
Dhugaa irraa hin maksine.
Dhiira qabsoo sabaaf
Lafeen isaa cabe.
Dhiira umrii hedduu
Mana hidhaatti dhabe.
dhiira sabaaf jedhee
Sadoo dhuunfaa dide.
Dhiira yeroo kamiyyuu
Dhugaa sabaa hin haalle.
Dhiira dhugaa malee
Sobaaf bakka hin laanne.
Dhiira haqa ummataa
gurguratee hin nyaanne.
Ummata isaa boonse.
Dhiira qabsoo sabaa
Dhabama irraa oolche.
Dhiira hidhaa fi raasasa
Dhiira summii nyaatee
dhiira kutaaf gandummaa
qabsoo irraa fageesse.
Dhiira shiraa diinaa
dhiira osoo qabuu
garaan isaa beela’e.
qaamni isaa eela’ee.
dhiira bubbee siyaasaaf
Asii fi achi hin daaqne.
dhiira garaaf jedhee
xuriin seenaa hin faalle.
dhiira oloolaa fi ususiin
dhiira beekaa fi wallaalaa ofii
hundaa obsaan baatu.
Waan Jaal Goollicha Dheengee dubbachuuf jecha ittiin ibsu hin qabu. Jaal Goollichii ajajaa waraana bilisummaa oromoo zoonii kibbaa qofa osoo hin taane nama jaal Marroo leenjisuun zoonii lixaa ijaareedha. Nama jaal Sanyii, jaal Bobbaas fi jaallan qabsoo saba leenjisuun kutaa waraana bilisummaa oromoo deebise ijaaree fi ijaaraa jiruudha.
QABSOON ITTI FUFA
Source: Shagar Media
ABO WBO Qeerroo - Jaal Maarroo - Goota Keenya
ABO WBO Qeerroo - Jaal Maarroo - Goota Keenya ﻿
Jaal Marroo fi Jaal Goollichi Hooggantoota keenya jedhu #QeerroonBaalee
Dubbii Bilxiginnaa fi murtee Jaal Marroo
European and US Consumer Electronics Sectors to Witness Recovery in 2021, Chinese Revenues to Continue Falling